Ciidamo Maraykan u daacad ah oo ku le’day qaraxyo Shabeehaha hoose ka dhacay. – Shabakadda Amiirnuur
November 24, 2020 5:29 am by admin Views: 68
12 askeri oo Soomaali ah kana tirsanaa Ciidamada Shirikadda Bankaraaf ee Maraykanku leeyahay ayaa shalay ku le’day qaraxyo ka dhacay Duleedka Garoonka Diyaaradaha ee Balli Doogle ee Gobalka Shabeelaha hoose kadib markii gaadiidki ay saarnaayeen qaraxyo la kaceen.
Waxaa la aaminsan yahay in dhimashada faraha badan ka sokow ay jiraan dhaawacyo soo gaaray Ciidamada kale ee gaadiika wax ka saarnaa.
Laba gaari oo nooca Somaalid aCabdile u taqaan ah oo Ciidamadaanu ay wateen ayaa basbeelay maadaama qaraxyada haleelay ahaayeen kuwo xoogan waxaana isqabsaday oo deegaanka laga arkayay holac iyo uuro wada jira.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay Masuuliyadda qaraxyadaan oo u muuqday kuwo si aad ah loo qorsheeyay.
Inkastoo Ciidamadaaan Alshabaab laysay ku suntan yihiin in ay Dowladda federaalka ah ka tirsan yihiin oo ay wataan magac ay lahaa jireen qayb ka mid ah malaterigii hore ee Soomaaliya oo ahaa Danab hadana waxay toos u hoos tagaan oo ay u daacad yihiin Dowladda Marayakanka taasoo hormuud u ah duulaanka Soomaaliya Shisheeyaha cadaanka iyo madowga lahu ku joogo.
Maraykanka ayaa Saldhigga sadaxaad ee Qaaradda Afrika ugu weyn wuxuu ku leeyahay Garoonka Balli doogle ee Dalka Soomaaliya waxaana waxaanuu halkaas ka abaabulaa howl galo kala duwan oo qayb ka ah waxa uu ugu yeero la dagalaanka argagixsada iyo cid walboo uu u arko in ay cabadka ku tahay danahiiisa gaar ah.